मोटरसाइकल सहित बडीगाड खोलामा खसेका चालकको शव भेट्टियो ! – ebaglung.com
२०७३ फाल्गुन २१, शनिबार १३:०२	Top News, थप समाचार
मृतक झापा दमक नगरपालिका- १३ का २२ वर्षिय अनुप महतो भएको पुष्टी !
राम सुबेदी, बुर्तिवाङ २०७३ फागुन २१ । शुक्रवार साँझ सवा ७ बजेको समयमा मध्य पहाडी लोकमार्गको बुर्तिवाङ बजार नजिक फुर्से पहराबाट बडीगाड खोलामा मे ३ प २०४६ नंको मोटरसाइकल सहित खसेका चालकको शव केहि समय पहिले प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियता फेला परेको छ । हिँजो अबेर राति सम्म प्रहरीले खोजविन गर्दा नभेटिएपछी आज विहानै देखी खोजकार्य सुरु गरेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार दमक नगरपालिका- १३ झापा निवासी बर्ष २२ को अनुप महतो भएको खुल्न आएको छ । मृतक महतो मैना निर्माण कम्पनीमा २ महिना देखी मध्यपहाडी लोकमार्गको भिङगिठेको भिङगाड खोलामा बनिरहेको मोटरेबल पुलमा काम गर्दै आएका थिए । मोटरसाईकल समेत मैना निर्माण कम्पनीको रहेको बुझिएको छ । निज महतो एकजना अर्को साथी संग बुर्तिवाङ बजारबाट आलु किनेर भिङगिठे तिर फर्कदै गर्दा सो दुर्घटना भएको हो ।
मृतकका साथीको पहिचान भएको छैन । निजले हिँजो दुर्घटना लगत्तै स्थानीय पूर्णबहादुर बिकलाई दुर्घटनाबारे बताएर बडीगाड खोलामा महतलाई खोज्न गएका थिए । मोटरसाईकल र चालक दुबै नदेखेपछी उनिहरु फर्किएका थिए । त्यसपछी कथित साथी फरार रहेका छन् । उनको मोबाईल फोन समेत स्विचअफ छ । प्रहरीले उनको खोजतलास गरिरहेको जनाएको छ । फरार साथी भेट्टिएमा दुर्घटनाको सम्वन्धमा बास्तविक रहस्य खुल्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
गुल्मीको क्याम्पसहरुको स्ववियू अखिल र क्रान्तिकारीको कव्जामा !